5 yemahara mitambo uye maapplication kana mutengo masipika kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
5 mitambo yemahara uye maapplication kana mutengo spins yenguva yakatarwa
Wakambocherekedza here iro rakanaka zuva razviri kuita? Mune mazhinji eSpain zvinotoita kunge tiri mukirasi yekutanga, nemhepo inodziya uye tembiricha izvo zvatove zviviri kumberi pakati pezuva. Pasina kupokana, ndiwo mamiriro ekunze anotikoka kuti tibude mumigwagwa, titambe mitambo, tizvikande uye titambe mimwe mitambo yemitambo yedu yatinofarira mupaki ... Uye zvinogona kutove nani neizvi kusarudzwa kwemitambo uye maapps emahara kana nezvakanakisa zvaderedzwa kuti nhasi tinokuunzira muActualidad iPhone.
Zvikumbiro zvekutora manotsi, mitambo yevana vadiki vari mumba (uye kune avo vasati vari vadiki), ronga hupenyu hwako nezvisungo nezvimwe zvakawanda. Kusarudzwa kwanhasi kwakasiyana zvakasiyana, uye ndine chokwadi kuti iwe uchawana chimwe chinhu chaunoda. Toita bvunzo here?
1 Mutsara - zvinyorwa zvine rusununguko rwakawanda rwekusika
2 Iyo Inoshamisa Bernard
3 Kunyange Zvikara Zvinorwara
4 Usamhanye nePlasma Munondo
5 Yakarongwa - Gara Wakarongeka nekukurumidza
Mutsara - zvinyorwa zvine rusununguko rwakawanda rwekusika
Outline Ndicho app kutora manotsi kubva kune yako iPhone uye iPad. Pamaapplication aya pane "churu", nei tichizozvinyengera, asi Outline ine zvimwe zvakanaka zvaungawana zvichibatsira. Semuenzaniso, vagadziri vayo vanotaura kuti kunyangwe paine rusununguko rukuru rwunopa rwekutora manotsi, zvinokutendera kuti uchengetedze chimiro chakajeka chepamusoro pakati pezvinyorwa zvako zvese. Uye zvakare, ine yakanaka uye inonzwisisika mushandisi interface, inokutendera iwe kuendesa uye kutumira kunze manotsi neOneNote, sarudza kwaunoda kuti zvinyorwa zvako zvichengetwe (Dropbox, iCloud, Bhokisi kana OneDrive) uye zvimwe zvakawanda.
Outline Iyo ine mutengo wenguva dzose we7,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana iri kutengeswa kwema1,99 euros chete. Iyo zvakare ine vhezheni yeMac, kunyange ichidhura yakawanda. Saka tanga watora mukana weichi chipo uye wozoti, gare gare, tarisa kana iwe uchiwedzera kana kusarudza kugara neapps app yawakashandisa kusvika ikozvino.
Outline: Powerful Notes10,99 €
Iyo Inoshamisa Bernard
En Iyo Inoshamisa Bernard iwe unozotora hunhu hwaBernie O'Tag, "ane mukurumbira, gamba rine mukurumbira pasi rese aine basa rakabudirira pane mamwe emabasa ane njodzi uye akakomba pasi rose ramboona," mune chiito ushingi mutambo mauri uchafanirwa kumhanya yakawanda.
Iyo Inoshamisa Bernard Iine mutengo wenguva dzose we3,99 euros zvakadaro izvozvi, uye kana ukakurumidza, unogona kuiwana yemahara.
Kunyange Zvikara Zvinorwara
Uye kune vadiki vari mumba, Kunyange Zvikara Zvinorwara, mutambo uchavatendera kusangana naHarry, yavo nyowani-mhuka, kuburikidza mitambo yakawanda uye yakasiyana yakagadzirirwa munyaya. Uye zvakare, mutambo unosanganisira yakawanda ye "zvakavanzika zviitiko uye zvinoshamisa" uye zvichabatsira vana vako kuvandudza yavo Chirungu.
Kunyange Zvikara Zvinorwara Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros zvakadaro izvozvi, uye kana iwe ukachimbidza, unogona kuzviwana mahara zvachose.
Kunyange Zvikara Zvinorwara1,09 €
Usamhanye nePlasma Munondo
Usamhanye nePlasma Munondo mutambo wepakutanga, «inosetsa mutero kune sainzi ngano mafirimu», mutambo weRetro umo iwe unofanirwa kumhanya nesimba kununura nyika.
Usamhanye nePlasma Munondo Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros zvakadaro izvozvi, uye kana iwe ukachimbidza, unogona kuzviwana mahara zvachose.
Usamhanye NePlasma Munondovakasununguka
Yakarongwa - Gara Wakarongeka nekukurumidza
Sezvo iwe ungave watoona kare, Zvakarongedzwa chirongwa icho inotibatsira kugara takarongeka. "Yakarongwa ndeye-yekuita-app inogadzirwa nevashandisi vanonakidzwa neyakareba-based-based interface. Chengetedza nguva shoma mumavhidhiyo edu ekudzidzisa uye uwane kurongeka nekukurumidza kupfuura nakare kose. »
Zvimwe zvezvinhu zvaro zvakatanhamara zvinosanganisira kuita-uye kutapudza zvinyorwa, zviyeuchidzo, maekisesaizi, kurongeka kwemabasa muzvinyorwa, zvirongwa, uye zvimwe zvakawanda.
Zvakarongedzwa Iine mutengo wenguva dzose we3,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana pahafu yemutengo we € 1,99 chete
NOTA: Ini ndinokuyeuchidza iwe zvakare kuti zvese zvakapfuura zvinopihwa uye kukwidziridzwa ndizvo Nguva Yakatemwa; Isu tinoziva kuti ivo vari kushingaira panguva yekuburitsa iyi posvo, asi isu hatizive kuti vachatora nguva yakareba sei. Naizvozvo, kana iwe uchifarira chero, mhanya! Gare gare, kana iwe ukaodzwa mwoyo, unogona kuidzorera ndokutorera mari yako, kana iwe wakabhadhara chimwe chinhu nokuda kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 5 mitambo yemahara uye maapplication kana mutengo spins yenguva yakatarwa
MWC 2017: Apple neSAP kuvhura yekutanga bhizinesi app munaKurume
MWC 2017: Sony, Nokia uye Lenovo vanopa zvavo zvishandiso zvitsva